Waa Kuwee Dukaameystayaasha Dahsoon Ee Lacagta Ugu Badan Bixiya? | 15 Shirkadaha ugu Fiican 2022
Bogga ugu weyn Waa Kuwee Dukaameystayaasha Dahsoon Ee Lacagta Ugu Badan Bixiya? | 15 Shirkadood ee ugu Fiican 2022
Isha sawirka: www.dollarsprout.com
Dukaamaysiga Qarsoodigu waa hab wax ku ool ah oo ay shirkaduhu u shaqaaleeyaan ujeeddada khibradda cilmi -baarista qancinta macaamiisha ee dukaanka.
Hagaag, aan qeexno.
Dukaamaysiga qarsoodiga ahi waa habka qofka lacag loo siiyo si uu dukaan uga dukaameysto oo uu u qiimeeyo waaxyo iyo adeegyo kala duwan oo laga bixiyo goobta ganacsiga.
Tani waxay noqotay hab wanaagsan oo lagu kasbado xoogaa lacag ah. Natiijo ahaan, maqaalkani wuxuu sharxi doonaa kuwa wax iibsada qarsoodiga ugu mushaharka badan adduunka.
WAA KUMA DUKAANTE Qarsoon?
Dukaanleyda Qarsoon waxay ururiyaan macluumaad muhiim ah oo ku saabsan suuqa ama tartamayaashiisa oo ay ku jiraan alaabada, qiimeeyaan waxqabadka shaqada, iibinta iyo tayada adeegga, iyo u hoggaansanaanta sharci ee ay shaqeeyaan ururada iyo shirkadaha cilmi -baarista.
Waxay si faahfaahsan uga warbixiyaan warcelin ku saabsan waayo -aragnimadooda macaamiisha si ay u tijaabiyaan haddii shaqaaluhu ay ku habboon yihiin inay u hoggaansamaan dabeecadda ku habboon astaanta ama warshadaha gaarka ah.
Dukaameystayaasha Qarsoon waa qandaraaslayaal madax -bannaan ama shaqaale gig ah oo loo riixay meherado kala duwan oo bixiya adeegyo sida makhaayadaha, bakhaarada, bangiyada, iyo halka macaamiisha loogu adeego. Waxay ku kala duwan yihiin waayo-aragnimo, iyagoo ka dhigaya waxoogaa kuwa wax iibsada qarsoodiga ugu mushaharka badan.
Shakhsiyaadkaas looma raadsado ujeedooyin go'aan-qaadasho laakiin waxay qiimeeyaan meherad kasta iyo nidaamkeeda taageerada macmiilka iyagoo samaynaya su'aalo, iibsashada shayada, wax ka cunidda makhaayadaha, ama soo celinta alaabta.
Xogta ay soo ururiyeen dukaanleyda qarsoodiga ah waxaa lagu helaa sahan ay indho -indheyn joogto ah ama marka loo shaqaynayo hawl gaar ah sida weydiinta su'aalo gaar ah ama noqoshada macmiil adag.
Hoos, waxaan ku qori doonnaa kuwa wax iibsada qarsoodiga ugu sarreeya.
WAA MAXAY ADEEGYADA AY BIXIYAAN DUKAAMAYAASHA QARANKA?
Dukaameystayaasha qarsoodiga ah waxay lacag ku helaan wadatashi xagga iibka iyo suuqgeynta. Waxay baaraan hababka gudaha, aragtida macmiilka ee ku saabsan astaanta, waxay falanqeeyaan suuqa tartamayaasha waxayna sidoo kale qiimeeyaan shaqaalaha iyo agabka barta wax iibsiga.
Shirkadaha qarsoodiga ah ee wax iibiya ayaa sidoo kale gacan ka geysanaya la -talinta hawlaha ganacsiga ee arrimaha. Kuwani waxay la xiriiri karaan suuqgeynta sida sameynta siyaasadaha iyo ujeeddooyinka, la socoshada iyo saadaalinta iibka, horumarinta badeecadaha cusub iyo qaababka qiimeynta, xayeysiisyada iyo qorshayaasha liisanka, iyo xeeladaha.
Shirkadaha wax iibsiga qarsoodiga ah waxay caawiyaan cabirka waxtarka xeeladaha iyo barnaamijyada la geeyay suuqgeynta. In kasta oo aysan ahayn waajibaadkooda ugu weyn, laakiin waxay noqon doontaa mid aan eex lahayn marka loo eego kuwa shirkadaha suuqgeynta.
Waxay ka caawiyaan ururinta xogta iyada oo la adeegsanayo hababka sida su'aalaha iyo sahannada. Waxay sidoo kale ku shaqeeyaan falanqaynta xogta la ururiyey iyadoo la adeegsanayo software tirakoob. Isticmaalka xogtan, waxay u diyaariyaan warbixinnada iyo natiijooyinka macmiilka.
JOOJINTA DUQMIYE QIIMO MIYAA U QALMAN?
Dukaameystayaasha qarsoodiga ah khiyaamo maahan haddii aad la xiriirto shirkad wax iibsan oo qarsoodi ah oo sumcad leh. Samee baaritaan sax ah ka hor intaadan gaarin iyaga.
Waxaad ku kasbataa hab aad u fiican marka aad tahay dukaameeyaha qarsoodiga ah ee jecel dukaamaysiga, fiirsada, iyo bulshada. Ka sokow mushaharka shaqadaada, waxaa laga yaabaa in laguu qoondeeyo inaad iibsato shay aad macno ahaan u awoodi weydo kaas oo lagu daray.
Dabacsanaanta shaqadu waa wax aad ku hammin karto, ku shaqaynta waqtigaaga iyada oo la raacayo hab -nololeedka shaqada ku lifaaqan, waayo -aragnimada shaqada ayaa kaa dhigaysa in aad haysato dalabyo aad loogu farxo oo kugu habboon ciribtirka caajisnimada inta lagu jiro hawsha.
Faa'iido kale ayaa ah in shaqadu ay daryeesho waxyaabaha ay ahayd inaad kaligaa samayso. Shaqada inteeda badan waxay noqon doontaa booqashada makhaayadda iyo maqaayadda, dukaanka raashinka, bangiyada, iyo meelaha kale ee aasaasiga ah ee baahida. Waxaa muhiim ah in la xuso marka la gaarayo iyaga, sheeg xiisahaaga si aad ugu dhigto shaqadaada.
Waxay ku siinaysaa dareen qancin ah oo aad gargaar u fidisay urur la xiriira hawl -maalmeedka caadiga ah. Tan waxaa lagu sameeyaa dib -u -eegis ku saabsan shaqooyinka loo shaqaynayo si ay u fuliyaan.
Guud ahaan, inaad tahay dukaan qarsoodi ah ayaa mudan.
INTEE AYEEY IIBIYAYAASHA QARSOONIGA?
Dhawaan, waxaa la diiwaangeliyey in celceliska mushaharka sanadlaha ah ee dukaameeyaha qarsoon ee Gobolka United uu yahay qiyaastii $ 42,000. Waxay u dhigantaa qiyaastii $ 3,500 bishii, $ 850 asbuucii, iyo $ 25 shaqo kasta.
Dukaameystayaasha qarsoodiga ah ayaa shaqadu bixineysaa oo saacad ma aha sida shaqooyinka magacyada ah, lacagaha caddeymaha leh waa la soo celiyaa haddii qarashka shaqada uu ka badan yahay lacagta la bixiyay ee kharashkaas.
Waa Maxay Qodobbada Go'aamiya Dukaanleyda/Shirkadaha Dahsoon ee Ugu Lacagta Badan?
Waxaa jira arrimo go'aaminaya celceliska dakhliga shirkadda wax iibsiga qarsoodiga ah sannad walba. Baaxadda shirkad wax iibsanaysa oo qarsoodi ah ayaa go'aamisa xaddiga ay kasbadaan, kasbashada shirkad si fiican loo aasaasay oo adeegyo adag ka bixisa xarun ku habboon tayadeeda lama simi karo shirkadda aan gaarsiisanayn heerka iyo tayada adeegga.
Meesha ay ku taallo shirkad qarsoodi ah oo wax iibsanaysa ayaa iyaduna go'aamisa dakhliga soo gala. Kuwa ku yaal aag ganacsi badan leh waxay kasbadaan wax ka badan kan ku yaal aagga meheradaha yar yar.
Adeegyada ay bixiyaan shirkadaha wax iibsiga ee qarsoodiga ah ayaa waliba saamayn ku leh dakhliga shirkadda. Shirkadaha wax iibsiga ee qarsoodiga ah waxay bixiyaan adeegyo dheeri ah oo dheeri ah marka laga reebo shaqada caadiga ah ee wax iibsiga. Hawsha sida kaalmada meheradda iyo talooyinka hawlgalka ee arrimaha suuqgeynta, franchising iyo qorshaynta ruqsadda, horumarinta sumadda iyo badeecadda iyo qiimeynta, saadaasha iibka, iyo horumarinta siyaasadaha suuqa, iyo ujeeddooyinka.
Habka loo maamulo shirkad ganacsi oo qarsoodi ah ayaa sidoo kale ah qodobbada kasbashada shirkadda. Shirkadaha wax iibsiga qarsoodiga ah ee ugu sarreeya oo leh maamulayaal wanaagsan ayaa adeegsada qaab maareyn oo aan fiicnayn si ay u quudiyaan koboca shirkadda iyada oo loo marayo xirfadaha adeegga macaamiisha iyo xayeysiinta oo ka duwan shirkad wax iibsi oo qarsoodi ah oo leh maamul xun oo aan garanayn waxa ay u baahan tahay si loogu soo baxo shirkad heer sare ah.
Fikradda iyo habka ganacsiga ee shirkad qarsoodi ah oo wax iibsanaysa ayaa saamaynaysa xaddiga la kasbaday. Shirkad qarsoodi ah oo wax ka iibisa oo bixisa adeegyo adag oo leh shaqaale aad u tiro badan oo loo xilsaaray hawsha loo igmaday ee shirkadu waxay kasbataa wax ka badan shirkad wax iibsi oo qarsoodi ah.
Iskaashi lala yeesho shirkadda xayeesiinta iyo suuqgeynta ayaa sidoo kale ka koraan shirkadda dukaamaysiga qarsoodiga ah talooyinka ka soo baxa shirkadda xayeysiiska iyo suuqgeynta.
Istaraatiijiyada suuq -geynta iyo xayaysiinta oo ay hirgeliso shirkad si qarsoodi ah wax uga iibsata ayaa saamayn ku leh kasbashada. Istaraatiijiyada suuqgeynta ee kala duwan waxay kordhisaa koritaanka hay'ad kasta.
Shirkadda wax iibsiga qarsoodiga ah ee ku hawlan xayeysiinta guud iyo suuqgeynta in kasta oo ay kharash badan bixin doonto laakiin waxay yeelan doontaa dakhli ka sarreeya marka la barbar dhigo shirkadda qarsoodiga ah ee adeegsata xayeysiisyada curyaaminta iyo farsamooyinka suuqgeynta.
Waayo -aragnimadu waxay muhiim u tahay dakhliga shirkadda wax iibsiga qarsoodiga ah. Sannado badan oo aad ku qaadato warshadaha qarsoodiga ah ee wax iibsiga ayaa kolba inta la aqoonsado waxaad noqonaysaa dakhli badan.
Inaad noqoto dukaan qarsoon ma dammaanad qaaddo shaqo waqti-buuxa ah. Waa shaqo ku jirta heshiis, marka lagu daro, waa hustle dhinac ah oo ku siinaya dakhli dheeraad ah oo aan shaqo adag lahayn.
Hoos waxaa lagu muujiyey isku-darka shirkadda wax iibsiga qarsoodiga ah ee ugu mushaharka badan. Kuwani asal ahaan waa kuwa wax iibsada qarsoodiga ugu mushaharka badan;
1. iShopFor Ipsos:
Ipsos oo ku taal Paris, oo la aasaasay 1975 oo hadda ka shaqaysa adduunka oo dhan ayaa ka mid ah shirkadda ugu weyn ee cilmi -baarista suuqa adduunka iyo shirkadaha wax -iibsiga qarsoodiga ah.
Dukaameystayaasha qarsoodiga ah ee leh shirkaddu waxay ku raaxaystaan ​​faa'iidooyinka sida cuntada bilaashka ah markay wax cunayaan, dayactirka iyo dayactirka baabuurka, dukaamaysiga lacag la'aanta ah, khadka tooska ah ama taleefoonka, martigalinta, bangiyada fudud, iyo fursadda kobaca iyadoo Ipsos uu yahay hanti -dhowre.
Waxay kasbadaan qiyaastii $ 5 illaa $ 30 shaqo kasta. Habka lacag -bixinta ayaa ah habka lacag -bixinta Paypal.
Si aad xaq ugu yeelatid waa inaad ka timaaddaa Mareykanka, Kanada, Chile, Belgium, Czech Republic, Germany, France, Italy. Hungary, Netherlands, Slovakia, United Kingdom, India. Thailand, Oceania, Australia, iyo New Zealand.
Kani waa mid ka mid ah Dukaameystayaasha Dahsoon ee Lacagta ugu sarreeya.
2. Cilmi -baarista Helion:
Cilmi -baarista Helion ee la aasaasay 2009 ayaa bilow weyn u ah bilowga dukaameysiga qarsoodiga ah.
Dukaameystayaasha qarsoodiga ah ee leh shirkaddu waxay ku raaxaystaan ​​waxoogaa faa'iidooyin ah sida dukaamaysiga bilaashka ah, samee xisaab -xidh, cilmi -baaris macmiil, ku -helidda gunnooyinka gudbinta sida barnaamij ku -xiran.
Dakhligeedu waa qiyaastii $ 7 - $ 20 halkii meeleyn. Qaabka lacag bixinta waa iyada oo loo marayo nidaamka lacag bixinta Paypal, Skrill, ama wareejinta bangiga.
Si aad xaq ugu yeelatid waxaad ka noqon kartaa meel kasta oo adduunka ah
3. Ciidanka Suuqa:
Xoogga suuqa ayaa jiray ilaa 1972.
Dukaameystayaasha qarsoodiga ah ee leh shirkaddu waxay ku raaxaystaan ​​waxoogaa faa'iidooyin ah sida dukaamaysiga lacag la'aanta ah, kormeerka warbaahinta bulshada.
Waxay kasbadaan qiyaastii $ 5 - $ 10 meeleyn kasta. Habka lacag bixinta bil walba waa wareejinta bangiga.
Si aad xaq ugu yeelatid waa inaad ka timaaddaa mid ka mid ah waddamadan; Mareykanka, UK, Ireland, Italy, France, Spain.
Clickworker wuxuu u xilsaaray dukaameyste qarsoodi ah si uu u sawiro meelaynta. Dukaameystayaasha qarsoodiga ah ee leh shirkaddu waxay ku raaxaystaan ​​xoogaa faa'iidooyin ah shirkadda sida booqashada dukaamada maxalliga ah, sawirrada, iyo gelinta.
Waxay kasbadaan guud ahaan qiyaastii € 8 - € 12. Qaabka lacag bixinta waa Paypal, Transferwise, ama wareejinta bangiga.
Si aad xaq ugu yeelatid waa inaad ka timaaddaa inta badan waddamada Yurub, Bariga Dhexe, iyo Mareykanka.
5. Labaad Midna:
Midda Labaad Midna sumcad wanaagsan kuma dhisin xariiqda taariikhda. Dukaameystayaasha qarsoodiga ah ee leh shirkaddu waxay ku raaxaystaan ​​waxoogaa faa'iidooyin ah sida goob-joogga ama dukaamaysiga qarsoodiga ah ee internetka, dukaamaysiga fiidiyaha, taleefan-ku-saleysan ama dukaamaysiga qarsoodiga ah ee guriga, cuntada qarsoodiga ah.
Waxay kasbadaan qiyaastii $ 5 - $ 20 meeleyn kasta. Habka lacag bixinta waxaa la sameeyaa bishiiba mar iyada oo loo marayo PayPal ama lagu shubo bangigaaga.
Si aad xaq ugu yeelatid waa inaad ka timaaddaa USA iyo Canada. Kani waa Dukaameystayaasha Dahsoon ee Lacagta ugu sarreeya.
6. Cuntada Dahsoon ee HGEM:
HGEM waxay siisaa fursad ay ku noqoto qadeeyaha qarsoodiga ah, dukaameeystayaasha qarsoodiga ah ee leh shirkaddu waxay ku raaxeystaan ​​xoogaa faa'iidooyin ah shirkadda sida maqaayadaha kala duwan.
Caadi ahaan, ma jiro wax lacag bixin ah, laakiin waxaad heli doontaa cunto bilaash ah oo ah abaalmarin, kharashyada la isku raacay ayaa lagu soo shubayaa koontadaada 3 ilaa 4 maalmood gudahood.
Si aad xaq ugu yeelatid waa inaad ka timaaddaa mid ka mid ah waddamadan; USA, France, Germany, UK, Spain.
Sidoo kale akhri: Sida loo sameeyo $ 500 dheeraad ah bishii: 15 Siyaabood oo lagu sameeyo Lacag caddaan ah
7. Xeeladaha Aragtida:
Istaraatiijiyadaha Aragtida Inc. waxay diiradda saaraan qaybta daryeelka caafimaadka. Dukaameystayaasha qarsoodiga ah ee leh shirkaddu waxay ku raaxaystaan ​​waxoogaa faa'iidooyin ah sida dukaamaysiga onlaynka ah, weydiimaha taleefanka, dukaamaysiga goobta.
Waxay kasbadaan qiyaastii $ 12- $ 17 meeleyn kasta. Qaabka lacag bixinta waa jeeg bilowga bil kasta.
Kani waa mid ka mid ah Dukaameystayaasha Dahsoon ee Lacagta ugu sarreeya. Si aad xaq ugu yeelatid waa inaad ka timaaddaa USA.
8. Dhulka hoose:
Grassroots waxay ku saleysan tahay Boqortooyada Midowday, dukaameystayaasha qarsoodiga ah oo leh shirkaddu waxay ku raaxaysataa faa'iidooyinka qaarkood sida dukaamaysiga qarsoodiga ah ee qofka, cuntada qarsoodiga ah, nashaadaadka firaaqada, dukaamaysiga internetka, tijaabinta adeegyada macmiilka, dukaamaysiga fiidiyaha.
Waxay kasbadaan qiyaastii £ 5 - 15 shaqo kasta. Qaabka lacag bixinta waxaa Bacs ku shuba bangigaaga laba jeer bishii. Si aad xaq ugu yeelatid waa inaad ka timaaddaa Boqortooyada Ingiriiska.
9. Calaamadda ugu Fiican:
Calaamadda ugu fiican ayaa lagu qiimeeyaa shirkadda ugu weyn ee wax iibsiga qarsoodiga ah oo leh in ka badan 10,000 oo shaqo.
Dukaameystayaasha qarsoodiga ah ee leh shirkaddu waxay ku raaxaystaan ​​xoogaa faa'iidooyin ah shirkadda sida dukaamaysiga qarsoodiga ah shaqsi ahaan ama internetka, la -talinta waayo -aragnimada macmiilka, xisaabinta u hoggaansanaanta, sahaminta hawlgelinta shaqaalaha.
Xaddiga lacag -bixintu way ku kala duwan tahay iyadoo lagu saleynayo meelaynta shaqsi $ 10 - $ 20 shaqo kasta.
Habka lacag bixinta waxaa lagu bixiyaa jeeg bishiiba laba jeer. Si aad xaq ugu yeelatid inaad noqoto dukaameeyaha qarsoodiga ah ee ugu mushaarka badan, waa inaad ka timaaddaa USA iyo Canada.
Kani waa Dukaameystayaasha Dahsoon ee Lacagta ugu sarreeya.
Tern waxaa laga aasaasay UK sanadkii 1989.
Dukaameystayaasha qarsoodiga ah ee leh shirkaddu waxay ku raaxaystaan ​​waxoogaa faa'iidooyin ah sida fiidiyowga iyo dukaamaysiga maqalka, warbixinta dukaanka, tijaabinta iibinta qaangaarka, sahaminta qanacsanaanta macaamiisha, xisaabinta tafaariiqda, dukaamaysiga xarunta wicitaanka.
Waxay kasbadaan qiyaastii £ 10 iyo £ 40 meeleyn kasta. Qaabka lacag -bixinta ayaa ah lacag -bixinno lacag caddaan ah oo la bixiyo toddobaadle, cunto bilaash ah, maalmo qoyska ka baxsan, iyo baayacmushtar bilaash ah. Si aad xaq ugu yeelatid waa inaad ka timaaddaa Boqortooyada Ingiriiska.
GBW markii hore GAPbuster oo ku yaal New Zealand waxaa la aasaasay 1994, oo ka shaqeysa in kabadan 100 waddan.
Dukaameystayaasha qarsoodiga ah ee leh shirkaddu waxay ku raaxaystaan ​​xoogaa faa'iidooyin ah shirkadda sida dukaamaysiga qarsoodiga ah iyo fursadda noqoshada hanti -dhawrka.
Ku kasbasho qiyaastii $ 5 illaa $ 30 halkii meeleyn. Qaabka lacag bixinta waa lacag caddaan ah, dhimis iibsi, ama magdhow.
Kani waa mid ka mid ah Dukaameystayaasha Dahsoon ee Lacagta ugu sarreeya. Si aad xaq ugu yeelato waxaad ka imaan kartaa wadan kasta.
12. Tafaariiqda ESA:
Tafaariiqda ESA waxay ka fulisaa UK iyo Ireland.
Dukaameystayaasha qarsoodiga ah ee leh shirkaddu waxay ku raaxaystaan ​​waxoogaa faa'iidooyin ah sida indha-indheynta dukaanka, hubinta da'da, dukaamaysiga khadka tooska ah, maqalka iyo dukaamaysiga guurguura.
Waxay kasbadaan ugu yaraan £ 10 shaqo kasta laakiin way kala duwan yihiin iyadoo ku saleysan hawsha. Lacag -bixinta waxaa la sameeyaa bil kasta iyada oo lagu wareejiyo bangiga.
Si aad xaq ugu yeelatid waa inaad ka timaaddaa Boqortooyada Ingiriiska iyo Jamhuuriyadda Ireland.
13. Dukaan Qarsoodi ah:
Shopper Shopper waa shirkad qarsoodi ah oo caalami ah oo la aasaasay 1990.
Dukaameystayaasha qarsoodiga ah ee leh shirkaddu waxay ku raaxaystaan ​​xoogaa faa'iidooyin ah shirkadda sida dukaamaysiga qarsoodiga ah, cuntada qarsoodiga ah.
Dakhliga soo gala waa qiyaastii $ 12 illaa $ 15, marka laga hadlayo dib u bixinta lacagta cuntada. Habka lacag bixinta waa bil walba jeeg 30 maalmood laga bilaabo dhammaystirka.
Si aad xaq ugu yeelatid, waxaad ka imaan kartaa waddan kasta.
14. U adeego Sharci:
Serve Legal wuxuu ku yaal UK iyo Ireland. Dukaameystayaasha qarsoodiga ah ee leh shirkaddu waxay ku raaxaystaan ​​xoogaa faa'iidooyin ah shirkadda sida dukaamaysiga qarsoodiga ah qof ahaan ama internetka, cabitaan bilaash ah.
Helitaanka dukaameystayaasha qarsoodiga ah ee ugu mushaharka badan waa qiyaastii £ 7 illaa 40 booqasho kasta, cabitaanno bilaash ah halkii meeleyn. Habka lacag bixinta waa iyada oo loo marayo Paypal iyo wareejinta bangiga.
Si aad xaq ugu yeelatid waa inaad ka timaaddaa UK iyo Ireland.
Pinnacle wuxuu jiray in ka badan 20 sano. Dukaameystayaasha qarsoodiga ah ee leh shirkaddu waxay u muuqdaan inay ku raaxeystaan ​​waxoogaa faa'iidooyin ah sida dukaanleyda qarsoodiga ah ee dukaanka ku jira, dukaamaysiga onlaynka ah, dukaamaysiga taleefanka.
Dukaameystayaasha qarsoodiga ah waxay kasbadaan qiyaastii $ 4 illaa $ 75 meeleyn kasta. Qaabka lacag bixinta waxaa la sameeyaa bil kasta 10 -ka bisha iyada oo loo marayo Paypal. Si aad xaq ugu yeelatid waa inaad ka timaaddaa USA.
Sidoo kale akhri: 10 Professor -ka Kulliyadaha ugu Mushaharka Badan Maraykanka 2022
Waa shaqaalaha nooleeya astaanta, waana lama huraan in iibka shaqaalaha iyo dabeecadaha adeegga ay la jaanqaadaan ballanqaadka astaanta. Ficiladu waxay ku hadlaan ka hadal badan.
Calaamadaha ayaa malaayiin doollar ku bixiya farriimaha dibedda si ay u qeexaan xiriirka shucuureed ee macmiilka. Si kastaba ha noqotee, marka macaamilku arko inuu kala go'ay shaqaale ka wakiil ah astaanta iyo farriinta dibedda, waxay hubaal ahaan la kulmi doonaan mugdi sumcad.
Natiijadu waxay si weyn u wiiqaysaa maalgashiyadan, ma aha oo kaliya macmiilka su'aasha ku jira laakiin shabakadooda bulshada oo dhan.
Dunida maanta ee isa soo taraysa, hal waayo -aragnimo xun ayaa la wadaagi karaa boqolaal haddii aysan kumanaan jeer dhaafin.
Iibsashada qarsoodigu waa aalad aad u fiican oo lagu waafajiyo iibka iyo dabeecadaha adeegga astaanta.
Barnaamijyada wax -iibinta qarsoodiga ah, marka loo maamulo si waafaqsan hab -dhaqannada ugu fiican ee qarsoodiga ah qaarkood, waxay tilmaamaan iibka iyo dabeecadaha adeegga ee ugu muhiimsan kuwa horseeda ujeedka iibsashada iyo daacadnimada macmiilka.
Sidaa darteed, maqaalkani wuxuu daboolayaa kuwa wax iibsada qarsoodiga ugu mushaharka badan adduunka.
Wizard 101 Dugsiyada Sixirka | Fasallada Solo ugu Fiican 2022
Sida Looga Dhigo 10k Bilkasta Online Toosan | 15 Hacks oo la Xaqiijiyay 2022
Samaynta 10k bishii waa wax ay dad badani rabaan laakiin sidaas uma fududa haddii aad...
Ganacsi kastaa wuxuu u baahan yahay lamaane dhaqaale si uu ugu adkaysto waqtiyada sida hoos u dhaca iyo wixii la mid ah. Xirfadlayaashan ayaa noqon doona…
Waa maxay Aagga Ganacsiga Xorta ah ee Shanghai? Saameynteeda, iyo Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka
Aagga Ganacsiga Pilot -ka xorta ah ee Shiinaha (Shanghai) (FTZ) waa kii ugu horreeyey ee noociisa ah ee ka dhaca Shiinaha. Waxay ahayd…
20 Siyaabood oo Lacag looga Helo Muusigga 2022 | Tusaha Sawirka 7aad
Si aad uga fogaato xiisahaaga oo aad hiwaayadda ugu beddesho ganacsi faa'iido leh waa guul aad u weyn. Laakiin…
Sida Lacag Loogu Sameeyo Drone | 10 Siyaabood oo La Xaqiijiyay
Waxay u badan tahay inaad aragtay sawir qaadayaasha, dilaaliinta hantida maguurtada ah ama soosaarayaasha muuqaalada oo helay diyaarad aan duuliye lahayn. Oo, waxaad la yaaban tahay…
11 Siyaabood oo Aan La Shaacin Oo Lacag Laga Helo Dukaanka Google Play 2022 -ka
Dadka lacagaha xariifka ah waxay raadiyaan habab ay lacag badan ku kasbadaan, ha ahaato maalgashi aad u badan ama ha ahaato dhaqdhaqaaq dhinac. Waxayna…